Ciidamada Mareykanka oo weerar ka fuliyay Sh/Hoose - Radio Risaala: Somali News Online
11 qof oo ku geeriyootay Diyaarad ku burburtay Turkiga
Eritea oo lagu eedeeyay in ay xasuuq ka geysatay gobolka Tigray
DHAGEYSO: Warka Subax 5-3-2021
Midowga Musharaxiinta ” Shirka waxaa fashiliyay dadka farriimaha u soo dirayay Rooble oo ah mid…
10 qof oo ku dhimatay shil Diyaaradeed
Museveni iyo Al-Burhani oo kulan ku yeeshay Entebbe
Soomaali ku geeriyootay doon la degtay
Cabsi ka taagan Xarunta baarlamaanka Maraykanka
Sacuudiga oo sheegay in ay burburiyeen diyaarad ay lahaayeen Xuutiyiinta
Diyaarad Helikopter oo ay Milliteriga dalkaasi lahaayeen ayaa ku burburtay meel ku dhow Tuulladda Cekmece oo u dhow Degmadda Tatvan ee Gobalka Bitlis ee…
DHAGEYSO: Warka Habeen 4-3-2021
DHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 04-03-2021
DHAGEYSO:-Warka Habeen ee Radio Risaala 03-03-2021
Home Wararka Ciidamada Mareykanka oo weerar ka fuliyay Sh/Hoose
Ciidamada Mareykanka oo weerar ka fuliyay Sh/Hoose
United States Marine Corps personnel from the 2nd Platoon, 1st Battalion, 1st Marine Regiment, who are in Australia as part of Marine Rotational Force - Darwin, press forward on a patrol during Exercise Hamel in Cultana training area, South Australia, on 1 July 2016. (Australian Defence Force photo by Cpl. Dan Pinhorn)
Sh/Hoose-RisaalaFM- Wararka aan ka heleyno degaan hoostaga degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi xalay saq dhexe uu ka dhacay weerar ay fuliyeen ciidan loo maleynayo inay ka tirsan kuwa dowladda Mareykanka.
Weerarkan oo ka dhacay duleedka degmada Wanlweyn ee gobolka Shabeellaha ayaa waxaa qeyb ka ahaa ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee ka tirsan Soomaaliya.
Dadka degaanka ayaa Idaacadda Risaala u sheegay inta uu halwgalka socday in ciidanka ay halkaasi ka kaxeysteen ilaa Saddex ruux oo ka mid ahaa dadka degaanka.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya halka ciidanka ay la aadeen ragga ay kaxeysteen, iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in la geeyay saldhigga Bali-doogle.
Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo aan la xiriirnay ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay faah faahin ka bixiyaan weerarkan iyo khasaaraha ka dhashay.
Previous articleGobolka Banaadir oo Daah-furay wadatashiga siyaasadda barakacayaasha (SAWIRRO)
Next articleGolaha Wasiirada oo ansixiyay Siyaasadda Kormeerka Iyo Qiimaynta (SAWIRRO)
Diyaarad Helikopter oo ay Milliteriga dalkaasi lahaayeen ayaa ku burburtay meel ku dhow Tuulladda Cekmece oo u dhow Degmadda Tatvan ee Gobalka Bitlis ee...